न्यु डायमन्ड र पुलिस उपाधिका लागि भिड्दै, कसले जित्ला उपाधि ? | Hamro Khelkud
न्यु डायमन्ड र पुलिस उपाधिका लागि भिड्दै, कसले जित्ला उपाधि ?
पोखरा (हाम्रो खेलकुद) – होङ्ग्वान्जी न्यु डायमन्ड काठमाडौं र विभागीय नेपाल पुलिस क्लब पोखराको लामाचौरमा तीजको अवसरमा आयोजित राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको फाइनलमा आज प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
खेल दिउसो १ बजेपछि लामाचौरमा रहेको इन्द्र राज्यलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयको खेल प्राङ्गणमा हुनेछ । डायमन्डले सेमिफाइनलमा गण्डकी प्रदेशलाई तथा पुलिसले श्री गाँउ खेलकुद बिकास समिति दाङलाई समान ३–० को सोझो सेटमा पराजित गर्दै उपाधि भेट पक्का गरेको हो । त्यसअघि तेस्रो स्थानको लागि गण्डकी प्रदेश र श्रीगाँउ खेलकुद बिकास समिति दाङबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
लामाचौर तीज भलिबलको सर्वाधिक सफल टोली न्यु डायमन्ड पाँचौ उपाधि जित्ने अभियानमा हुनेछ । पछिल्लो दुईवर्ष एपीएफसँग फाइनलमा निराश भएको डायमन्ड यसपटक पुलिसलाई निराश बनाउदै उपाधि जित्ने लक्ष्यमा हुनेछ । डायमन्ड २०७० देखि २०७३ सम्मको लगातार च्याम्पियन टोली हो । डायमन्ड आफ्ना मुख्य खेलाडी प्रतिभा माली र सलिना श्रेष्ठ बिनै कोर्टमा उत्रनेछ । प्रतिभा र सलिना दुवै राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका छन् ।
सिपोरा गुरुङको साथ पाएको डायमन्डसँग कप्तान ललिता नाथ, पनामिका राई र युवा प्रतिभाहरु वलमिका आचार्य झरना श्रेष्ठ रहेका छन् ।
यता, पुलिस लामो समयपछि तीज भलिबलको फाइनलमा स्थान बनाउन सफल पुलिस लामो समयपछि नै तीज भलिबल आफ्नो पोल्टामा पार्ने लक्ष्यमा कोर्टमा उत्रनेछ । यो प्रतियोगितामा डायमन्ड र एपीएफले लगातार सातपटक उपाधि बाड्नुअघि पुलिस र पश्चिमाञ्चल हावी हुने गरेको थियो ।
कोपिला उप्रेती, कोपिला राना, सुशीला थापा, मनिषा चौधरी, पुष्पा चौधरी, तिला चौधरी र केही नयाँ खेलाडीको साथ रहेको पुलिसले समूह चरणमा डायमन्डमाथि ३–२ को कठिन जित निकालेको थियो । समूह चरणमा पाएको जितले आत्मविश्वासी देखिएको पुलिस सोही जितलाई निरन्तरता दिने लक्ष्यमा हुनेछ ।
पुलिसका महत्वपुर्ण खेलाडी उषा भन्डारी, कमला पुन र शान्ति तामाङ राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षणमा रहेका कारण टोलीसँग पोखरामा रहेका छ्रैनन् ।
लिग कम नकआउटका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष दुई टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछ । प्रतियोगिताको विजेताले १ लाख, उपविजेतालाई ६५ हजार र तेश्रोेलाई २५ हजार साथमा शील्ड, मेडल र प्रमाणपत्र वितरण गरिने आयोजकले जनाएको छ । उत्कृष्ट खेलाडीलाई आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरिने भएको छ ।
प्रतियोगिताको पछिल्लो आठौं संस्करण जारी रहँदा डायमन्ड चारपटक तथा विभागीय नेपाल एपीएफ क्लब तीनपटक च्याम्पियन बनेको छ ।